HIM | Health in Myanmar » 2013 » February
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ရန်ပုံငွေ, အခွင့်အရေး
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် HIV/AIDS ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများ၌ လူနာများလာသည့် အတွက် အနည်းဆုံး လူဦးရေ ၃ဝဝ ဆံ့သည့် ဂေဟာအသစ် ထပ်မံ ဆောက်လုပ် သွားမည်ဟု ၄င်းစင်တာမှ မနန္ဒာလင်းက ပြောသည်။
Global Fund Human Rights Reference Group
The deadline is tomorrow for applicants to become part of the Global Fund Human Rights Reference Group. [him] moderator ++++++++++++++++++ ABOUT THE GLOBAL FUND HUMAN RIGHTS REFERENCE GROUP As part of fulfilling the Global Fund Board of Directors Strategy 2012-16 objective to protect and promote human rights, the Human Rights Reference Group will advise the […]
အမေးအဖြေ (၁၂၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တားဆေး စားဆေးနဲ့ ထိုးဆေးတွေက ၇ ရက်ကြာမှသာ ထိရောက် ကောင်းတယ်။ မတိုင်ခင် အကာအကွယ် တနည်းနည်း သုံးသင့်ပါတယ်။ Depo injection ကို ရာသီ စဆင်းတဲ့ နေ့ကနေ ၅ ရက်အတွင်း ထိုးရင် ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ ၅ ရက်နောက်မှ ထိုးရင် ၂ ပါတ်ကြာမှ ထိရောက်တယ်။
Two new appointments at the 3MDG Fund
Here are two new appointments at the 3MDG Fund. [him] moderator ++++++++++++++++++ Dr Paul Sender joined 3MDG on 25th February as Fund Director. Many of you will know Dr Sender, he worked as Country Director of Merlin in Myanmar foranumber of years. He comes to the Fund withagreat deal of knowledge […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, SW, အခွင့်အရေး
ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး အကြောင်းရင်း မေးကြည့်တော့ NGO အဖွဲ့က HIV ဝေဒနာ ရှိသူတွေကို နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေး ပညာပေးရင်း ဆေးနဲ့ဆန် အခမဲ့ ဝေငှတယ် လို့ပြော ပါတယ်။ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စား သွားပါပြီ။ မသိ မသာ ထိုလူများကို ကြည့်လိုက်တော့ အသက်လေးဆယ်အောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များသာ တစ်ဦးချင်းလည်း ပါသလို လင်မယား စုံတွဲတွေလည်း ပါတယ်။ မကြာပါဘူး ဆန်ထုပ် ကိုယ်စီထမ်းပြီး ထွက်သွား ကြတော့တယ်။
Tenders for trafficking programme
Here isachance to separate trafficking from HIV. The two never should have been associated and now they are conflated. [him] moderator ++++++++++++++++++ FINAL PROGRAM DESIGN DOCUMENT FOR THE AUSTRALIA–ASIA PROGRAM TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS (AAPTIP) The Australia–Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP) isanew program to combat trafficking in […]
အမေ့ခံ ပုံရိပ်နဲ့ HIV ဝေဒနာရှင်
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: BBC, HIV, အခွင့်အရေး
စဖြစ်ချိန် ကာလကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်မိသားစုတွေ စိတ်မဆင်းရဲ စေချင်ဘူး.. ကိုယ့်အသိုင်း အဝိုင်းကိုလည်း ကိုယ့်အတွက်နဲ့ အရှက်မရစေချင်ဘူး.. ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားတင်းပြီး နေခဲ့ ပါသေးတယ်.. အားတင်းယူရတဲ့ အကြောင်းကတော့ တစ်ဦးတည်သော သမီးလေးကြောင့်ပေါ့… သမီးလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် .. ဒီသမီးလေးအတွက် ဘဝမှာ ရှင်သန်မှ ဖြစ်မယ်…ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားတင်းပြီး ဘဝကို ရုန်းကန်ခဲ့တာပါ…
PEPFAR gets an evaluation
PEPFAR is ten years old so it is time for an evaluation. You can download the evaluation report. Warning – This report is ten megabytes. http://www.iom.edu/Reports/2013/Evaluation-of-PEPFAR.aspx Prevention was clearly recognised by the evaluation team asaweakness. And it was not measured well. It is interesting that counselling and testing have been included undera[…]
အမေးအဖြေ (၁၂၃) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, လူငယ်, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျနော် 15.2.13 ညက မိန်းကလေး တယောက်နဲ့ အတူတူနေဖြစ်သွားပါတယ်။ 16 ရက်နေ့ ညကသူ့ကို LEVO-72 သောက်ခိုင်း လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရာသီက 8.2.13 က မှပြီးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာပဲ ရာသီပြန်စပြီး အများကြီး ဖြစ်နေလို့ မေးကြည့်တာပါ။ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလား ဆရာ။ အရင်က Ecee2 တော့ တိုက်ဖူး ပါတယ်။ ရာသီချိန် ပုံမှန်ပါပဲ။ အရေးပေါ်ဆေးမှာ ဆိုရင် ဘယ်ဆေးက side effect အနည်းဆုံးပါလဲ ဆရာ။
ဆက်ဆံရင်း ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတာ...
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, ကွန်ဒုံး, ပညာပေး, အမျိုးသား
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး အတွက်ကတော့ လိင်ကိစ္စအပြီး ၃ လမပြည့်သေးဘူးဆိုရင် အလားတူ လိင်ကိစ္စတွေ မပြု လုပ်ပဲ ရှောင်နေပြီး ၃ လကျော်မှ သွေးစစ် သင့်ပါတယ်။ ၃ လမှာ စစ်လို့ မတွေ့သေးဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် ၃ လ ထပ်စောင့် (စုစုပေါင်း ၆ လ) ပြီး သွေးထပ်စစ်ပါ။ အဲဒီမှာ မတွေ့ရင်တော့ စိတ်အေးရပါပြီ။ ရန်ကုန်မှာ နေတယ် ဆိုရင်တော့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့စည်းတွေမှ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေး သင့်ပါတယ်။
A UNICEF video is incorrect
Mark Goldberg of UN Dispatch is always up on the latest development news as he is fed directly from the United Nations. He postedavideo related to Myanmar and writes: “Here isafascinating — and wonky — video from UNICEF. It relates something I didn’t know: the largest number of new HIV infections […]
ဝေဖန်နေကြသူများ မသိရှိကြသည့် အကြောင်းမှာ ၄င်းတို့၏ နည်းဗျူဟာ အထမမြောက်စေဖို့ 0.1 micron သာရှိသည့် အလွန်သေးငယ် လှသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက လူ့ အသက်ပေါင်း များစွာကို ဇီဝိန်ခြွေရင်း လုပ်အားနှုန်းကို တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေစေခြင်းပင်။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်၏ အမည်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဗိုင်းရပ်စ်ပင်ဖြစ်သည်။